१२:०८, ११ सेप्टेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन
१७ bytes added , १ वर्ष अघि
clean up, replaced: शृंखला → शृङ्खला (6) स्वतःविकी ब्राउजर प्रयोग गर्दै
१०:३१, ३ सेप्टेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
१२:०८, ११ सेप्टेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (clean up, replaced: शृंखला → शृङ्खला (6) स्वतःविकी ब्राउजर प्रयोग गर्दै)
[[Image:Nagasakibomb.jpg|thumbnail|right|200px| सन् १९४५मा जापानका नागासाकीमा झारिएका बमदेखि उत्पन्न भयङकर मेघको सदृश बादल - यी बादल बमका झरेका स्थानदेखि लगभग १८ किमी माथिसम्म उठेका थिए।]]
'''नाभिकीय अस्त्र''' वा '''परमाणु बम''' एउटा विस्फोटक युक्ति हो जसको विध्वंशक शक्तिको आधार [[नाभिकीय प्रतिक्रिया]] हुन्छ। यो [[नाभिकीय संलयन]] (nuclear fusion) वा [[नाभिकीय विखण्डन]] (nuclear fission) वा यी दुइटै प्रकारको नाभिकीय प्रतिक्रियाहरूका सम्मिलनदेखि बनाउन सकिन्छ। दुइटै नैं प्रकारका प्रतिक्रियाहरूका परिणामस्वरूप केही सामग्रीदेखि भारी मात्रामा [[ऊर्जा|उर्जा]] उत्पन्न हुन्छ। आजको एउटा हजार किलोदेखि थोरै ठूलो नाभिकीय हथियार यति उर्जा उत्पन्न गर्न सक्छ जति धेरै अरब किलोका परम्परागत विस्फोटकहरूबाट उत्पन्न हुन सक्छ। नाभिकीय हथियार महाविनाशकारी हथियार (weapons of mass destruction) भनिन्छन्।
[[दोस्रो विश्व युद्ध|दोस्रो विश्वयुद्ध]]मा सबैभन्दा अधिक शक्तिशाली विस्फोटक, जो प्रयुक्त भएको थियो, त्यसको नाम 'ब्लकबस्टर' (blockbuster) थियो। यसको निर्माणमा तबसम्म ज्ञात प्रबलतम विस्फोटक ट्राईनाइट्रीटोलीन (TNT)को ११ टन प्रयुक्त भएको थियो। यस विस्फोटकदेखि २००० गुना अधिक शक्तिशाली प्रथम परमाणु बम थियो जसको विस्फोट टी. एन. टी.का २२,००० टनका विस्फोटका बराबर थियो। अब त प्रथम परमाणु बम भन्दा अधिक शाक्तिशाली परमाणु बम बनेका छन्।
परमाणु बममा विस्फुटित हुनेवाला पदार्थ [[यूरेनियम]] वा [[प्लुटोनियम]] हुन्छ। यूरेनियम वा प्लुटोनियमका परमाणु विखंडन (Fission) देखि नैं शाक्ति प्राप्त हुन्छ। यसका लागि परमाणुका केन्द्रक (nucleus)मा न्यूट्रन (neutron)द्वारा प्रहार गरिन्छ। यस प्रह्योरदेखि नैं धेरै ठूलो मात्रामा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यस प्रक्रमलाई भौतिक विज्ञानी नाभिकीय विखंडन (nuclear fission) भन्दछन्। परमाणुका नाभिकका अभ्यंतरमा जो न्यूट्रान हुन्छन् उनैदेखि न्यूट्रान मुक्त हुन्छन्। यी न्यूट्रन अन्य परमाणुहरूमा प्रह्योर गर्दछन् र उनीसित फेरि विखंडन हुन्छ। यी फेरि अन्य परमाणुहरूको विखंडन गर्दछन्। यस प्रकार शृंखलाशृङ्खला क्रियाहरू आरम्भ हुन्छन्। परमाणु बमको अनियन्त्रित शृंखलाशृङ्खला क्रियाहरूका फलस्वरूप भीषण प्रचंडताका साथ परमाणुको विस्फोट हुन्छ।
यूरेनियमका धेरै [[समस्थानिक]] ज्ञात छन्। सामान्य यूरेनियममा ९९.३ प्रतिशत यू-२३८ (U-२३८) र ०.७ प्रतिशत यू-२३५ (U-२३५) रहन्छन्। यू-२३८को विखंडन उतनी सरलतादेखि हुँदैन जति सरलतादेखि यू-२३५को विखंडन हुन्छ। यू-२३५मा यू-२३८को अपेक्षा तीन न्यूट्रान कम रहन्छन्। न्यूट्रनको यस कमीका कारण नैं यू-२३५को विखंडन सरलतादेखि हुन्छ।
अन्य विखंडनीय पदार्थ जो परमाणु बममा काम आउँछन् ती यू-२३३ र प्लुटोनियम-२३९ छन्। परमाणु विस्फोटका लागि विखंडनीय पदार्थको क्रान्तिक संहति (critical mass) आवश्यक हुन्छ। शृंखलाशृङ्खला क्रियाका चालू गर्नका लागि क्रान्तिक संहति न्यूनतम मात्रा हो। यदि विखंडनीय पदार्थको मात्रा क्रान्तिक संहतिदेखि कम छ त न्यूट्रान केवल धुर्रधुर्र गरता रह्नेछ। मात्राका बिस्तारै बढाउनुले एउटा समय यस्तो अवस्था आएगी जब कमभन्दा कम एउटा उन्मुक्त न्यूट्रन एउटा नयाँ परमाणुमा प्रह्योर गर्न त्यसका विखंडन गर्न द्नेछ। यस्तो स्थिति पुगनमा विखंडन क्रिया स्वत: चलने लाग्दछ। क्रान्तिक संहतिको मात्रा गोपनीय हो। जो राष्ट्र परमाणु बम बनाउँदछन् ती नैं जान्दछन् र अर्कालोई बतलाँदै छैन।
यदि यू-२३५को [[क्रान्तिक द्रव्यमान|क्रान्तिक संहति]] २० पौण्ड छ त दस दस पौण्ड दुई जग्गा लेनाले शृंखलाशृङ्खला क्रिया चालू हुनेछैन। २० पौण्डलाई एउटा साथ लेनाले नैं शृंखलाक्रियाशृङ्खलाक्रिया चालू हुनेछ। शृंखलाक्रियामाशृङ्खलाक्रियामा न्यूट्रनको संख्या ठूलो शीघ्रतासित बढ्दछ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/915467" बाट अनुप्रेषित